I-Indra iveza uhlelo lokusebenza olukwazi ukuthola nokulawula ama-drones | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Uma kwenzeka ungazi, akutshele lokho Indra ingelinye lamazwe aseSpain ahlobene nezwe lokuthuthukiswa kwesoftware kanye nezeluleko ezibaluleke kakhulu eYurophu. Unalokhu engqondweni, akunzima ukuqonda ukuthi banqume ukungena ezweni lama-drones ngokuphakamisa izixazululo ezithile, kulokhu ezihlobene nomhlaba wezokuphepha.
Namuhla ngithanda ukukhuluma nawe ngohlelo oluhlakaniphile lwe-ARMS, Uhlelo lwe-Anti RPAS Multisensor, eyenziwe ngonjiniyela be-Indra, ipulatifomu elungiselelwe ukuthola noma yiluphi uhlobo lwe-drone ukude ngokusebenzisa i- radar ngobubanzi bamakhilomitha amaningana kude. Lapho sekutholakele idrone, ipulatifomu iyashintsha isimo bese isebenzisa i-a imvamisa inhibitor yamabhendi ahlukene ukukhansela isignali yemishini ye-geolocation yedrone kanye nesixhumanisi sayo sokuxhumana nesilawuli.
Isoft ivivinya isoftware ekwazi ukuthola nokulawula i-drone.
Akungabazeki, kufanele kwaziwe ukuthi i-Indra ibheja kakhulu emkhakheni we-drone nezokuxhumana, ubuchwepheshe obusha kakhulu obudala izinkinga ezinkulu emhlabeni wonke, ikakhulukazi, njengoba sesibonile kwesinye isikhathi, lapho unezindiza ezingagadiwe zingena izikhala zomoya ezikhawulelweKungadala ukulimala noma ngqo ngenxa yolwazi olungelona iqiniso lwesilawuli, isenzo esingadala ukulimala okukhulu futhi nokulahlekelwa ngusozigidi kwabadlali kulezi zikhundla zomoya.
Okwamanje, njengoba sekuqinisekisiwe, lolu hlelo lusesigabeni sokuthuthuka njengoba izwe laseSpain lisenza izivivinyo ukufezekisa ukunemba okuphezulu uma kukhulunywa epulatifomu ukuthola, ukuhlukanisa nokulandela noma yiluphi uhlobo lwezindiza ezingenamuntu ezihlanganisa ukusetshenziswa wezithombe ezishisayo nokulalela umsakazo. Umzuzwana Ukuziphendukela kwemvelo izovumela uhlelo lwe-ARMS lawula i-drone bese uyiqondisa endaweni ephephile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » I-Indra iveza uhlelo lokusebenza olukwazi ukuthola nokulawula ama-drones
Dala uhlelo lomculo olwamukelekile nge-Raspberry Pi